Hosoka :: Tra-tehaka ilay vehivavy mpivarotra diplaoma sandoka • AoRaha
Hosoka Tra-tehaka ilay vehivavy mpivarotra diplaoma sandoka
Nalain’ny zandary teny an-tranony, tetsy Ambohimahitsy, andro vitsy lasa izay, ny vehivavy iray voatondro ho mpanao sy mpivarotra diplaoma hosoka tamin’ny anarana sekoly ambony iray. Naiditra am-ponja vonjimaika izy, rehefa avy natolotra ny Fitsarana teny Anosy, omaly.
Arahin’ny Fitsarana maso kosa ny olona roa hafa voasaringotra miaraka aminy. Mitohy ny fanadihadiana sy ny fikarohana an’ireo mpiray tsikombakomba tamin’izao fanaovana ny hosoka sy ny momba an’ireo diplaoma sandoka efa niparitaka.
Talen’ny sekoly ambony tsy miankina iray no nametraka fitoriana tao amin’ny Foiben’ny fikarohana fandikan-dalàna eo anivon’ny Fibaikoana ny Zandarimariam-pirenena, tamin’ny alatsinainy 31 aogositra lasa teo, momba ny vehivavy iray manamboatra sy mivarotra diplaoma hosoka amin’ny anaran’ny sekoly iandraiketany. Voalaza ihany koa fa mangalatra ny sonian’ny tale io vehivavy. Niainga teo ny famotorana rehetra sy ny fahatrarana an’ireo olona voakasika amin’izao raharaha izao.
Vono olona tsy niniana natao :: Vehivavy maty voatifitry ny zandary